Amalahle omdaka: iimpawu, ukusetyenziswa kunye nezibonelelo | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Ukuba ucinga ngokuthenga i-barbecue yentsimi yakho okanye yegadi yakho, ngokuqinisekileyo unamathandabuzo. Kukho umahluko phakathi amalahle omdaka okanye igesi. Kukho iintlobo ezahlukeneyo kwaye nganye ineempawu ezibalulekileyo. Okokuqala, kufuneka sigqibe ukuba siyayidinga i-barbecue ephathekayo okanye esisigxina. Kuxhomekeke nakwinto esinayo egadini okanye ebaleni.
Ke ngoko, siza kunikezela eli nqaku ukuba likuxelele yonke into ekufuneka uyazi malunga namalahle omdaka kunye neempawu zawo.
1 Yeyiphi i-barbecue ekufuneka ndiyisebenzisile
2 Umahluko phakathi kwamalahle kunye neerhasi zerhasi
2.1 Iimpawu zebhayoloji yamalahle
2.2 Iimpawu zeerhasi zerhasi
Yeyiphi i-barbecue ekufuneka ndiyisebenzisile
Xa sifuna ukufaka i-barbecue intsimi yethu yegadi, akukho mathandabuzo. Enye yazo kukuba kufuneka sakhe i-barbecue yezitena, sithenge nayiphi na irhasi esele yenziwe okanye irhasi yamalahle. Okokuqala, kufuneka sigqibe ukuba into esiyifunayo lilaptop okanye esisigxina. Kuxhomekeka kuhlobo lwendawo esinayo egadini yethu, sinokuba nomdla kwindawo esele ikhethwe okanye kwisitena. Kwezi meko ijongene namabala okombiwa avulekileyo emoyeni. Oko kukuthi, apha siza kutshabalalisa kuwo onke amacala obushushu kunye nomsi. Oku kusibangela ukuba sichithe ipetroli encinci kuneebhaybheki ezihambayo.
Iibhakeji ezihambahambayo zinika ithuba lokuba nesiciko sokuvala indawo yomlilo. Ngokuphathelele incasa, awuyi kuwubona umohluko xa upheka kwenye okanye kwenye. Umahluko uyaxatyiswa kuphela kuxhomekeka kuhlobo lwamafutha owasebenzisayo. Ukuba usebenzisa amalahle, igesi okanye ukosa inyama, uza kuba nencasa eyahlukileyo kuzo nganye yazo. Makhe sibone ukuba yintoni umahluko ophambili phakathi kwamalahle kunye neerhasi zerhasi.
Umahluko phakathi kwamalahle kunye neerhasi zerhasi
Ukuba ukhethe i-barbecue ehambayo, lixesha lokuba uthathe isigqibo sokuba siza kuyithenga enokuvalwa indlu okanye akunjalo. Kuyimfuneko ukwazi uhlobo lwamafutha esiza kuwongeza. Kucetyiswa ukuba ukhethe ezo zi-barbecue ezinokugqunywa ekhaya. Kwaye kukuba kolu hlobo lokosa inyama sinokonga ipetroli eninzi kwaye sipheka ukutya ngokukhawuleza. Kwezo barbecue ezingenasigqubuthelo kukho ilahleko enkulu yobushushu, ke ngoko ukutya kuthatha ixesha elide ukupheka. Incasa nayo iyahluka ngandlela thile.
Masibone ukuba ziziphi iimpawu zerhasi yomdaka.
Iimpawu zebhayoloji yamalahle
Zilula kakhulu kwaye kulula ukuzisebenzisa kunezo zegesi. Ukongeza, xa uthenga, ukuba ayisiyonto siza kuyisebenzisa rhoqo, sinokuthi siqwalasele ukuba zitshiphu kakhulu. Ukuba asizukusebenzisa i-barbecues kwindibano yosapho ukuze siyisebenzise rhoqo, Asinamdla wokuthenga i-barbecue enexabiso eliphezulu. Siza kujonga eyona ndlela iphantsi "yokuphuma enkathazweni".
Xa kufikwa ekuphekeni yenye ingxaki.Iibhaskiti zamalahle kunzima kakhulu ukufikelela kubushushu obufanelekileyo ukuze ukwazi ukupheka ukutya kakuhle. Kwi barbecues yegesi, kulula kakhulu ukufikelela kumaqondo obushushu afuna ukutya. Kwezo zomthi okanye amalahle kufuneka sichithe ixesha elininzi ngakumbi ukuze sikwazi ukufezekisa ukuba amalahle anezinga eliphezulu lobushushu ukuze sikwazi ukugqithisa ukutya kakuhle.
Ikharbhon okanye iitribe zokubhaka zinokuba yingozi kunezo zokwenza igesi ekuqaleni. Kwaye ukuba nawaphi na amalahle anokutsiba aphume ekhaya kwaye abangele umlilo. Ngale nto, indawo esiya kuyo ukuze sikwazi ukwenza i-barbecue kufuneka siyilungiselele. Oko kukuthi, kufuneka siyigcine kude nengca eyomileyo ukuba sinesitiya. Kungcono ukuyibeka kwindawo ene umgangatho ongekhoyo apho kungekho ngozi yomlilo.
Nje ukuba sigqibe ukosa ukutya, i-barbecues yamalahle inomsebenzi omkhulu wokukwazi ukukhupha amalahle avuthayo. Singatsho ukuba olu hlobo lweebhrukhwe alumdaka kwaye unomsebenzi omkhulu wolondolozo.
Iimpawu zeerhasi zerhasi
Ngokubanzi, olu hlobo lwe barbecues soloko lunesigqubuthelo sokuthintela amadangatye ekuphumeni ngenxa yempembelelo yomoya. Oku kunceda ukwandisa ukusebenza kakuhle xa upheka ukutya. Ibarbecues zegesi zifikelela kubushushu obulungileyo bokupheka ukutya ngokukhawuleza kakhulu kunangaphambili. Oku kuyenza ukuba ikhawuleze kwaye isebenze ngakumbi. Ibarbecu zerhasi azisebenzisi amalahle, ke zikhuselekile kwindawo yokujonga naluphi na uhlobo lomlilo olunokubangela intlantsi ngaphandle kwekhaya ngenxa yeso sizathu.
Nazi izinto onokuzigcina engqondweni. Ubungozi beebhayoloji zamalahle buxhomekeke kuhlobo lokusetyenziswa esikunikayo. Ukuba asilumkanga xa sibeka i-barbeque kwindawo engengobungozi, kuyinto eqhelekileyo ukuba kungabakho umngcipheko. Kuxhomekeke kuthi ukuba sinokusebenzisa olunye uhlobo lwebheyi okanye enye.
Ngokubhekisele kwixabiso, sinokuthi i-barbecues yegesi ibiza kakhulu kuba ziphucukile. Kuxhomekeka kuhlobo, imodeli kunye nobunzima bendawo yomlilo kunamafutha. Singafumana i-barbecues yegesi ngamaxabiso asezantsi kakhulu. Nangona kunjalo, konke kuxhomekeke ekusebenziseni esiza kunika nganye nganye.
Kuya kufuneka sazi ukuba ngokuxhomekeke ekusetyenzisweni esiza kunika i-barbecue, ukuba yinto eqhelekileyo okanye ayikho, sinokuba nomdla kwenye okanye kwenye. Ukuba yinto esiza kuyisebenzisa okwexeshana, kuyacetyiswa ukuba sifumane amalahle eyojiweyo. Kungenxa yokuba zitshiphu kwaye kulula ukuzisebenzisa. Nangona benolondolozo oluncinci, ukuba ukusetyenziswa kwabo akuhlali ixesha elide kwaye rhoqo, oku kugcina kuncipha. Malunga nobungozi, kuxhomekeke kwindawo esiza kuyibeka kuyo. Ngokufanelekileyo, jonga umngxunya egadini apho kungekho zingca zomeyo kwaye kungekho bungozi bomlilo ekuxeleni kwamalahle avuthayo.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungafunda ngakumbi malunga neebhayceke zamalahle, iimpawu zazo kunye nezinto eziluncedo kuzo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Ukonga umbane » Uqoqosho lwaseKhaya » Amalahle omdaka